भोजपुरमा र्यापिड टेष्टमा एक जनामा कोरोना पोजेटिभ — KhabarTweet
भोजपुरमा र्यापिड टेष्टमा एक जनामा कोरोना पोजेटिभ
- भोजपुरमा र्यापिड टेष्टमा एक जनामा कोरोना पोजेटिभ दिङ्ला–भोजपुरका एक जना पुरुषमा र्यापिड टेष्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १४ बोया बेखुम्चाका एक जना पुरुषमा आर.डि.टी पोजेटिभ देखिएको हो । ३ जनाको आर.डि.टी परिक्षण गर्दा एकजनामा पोजेटिभ देखिएको छ । ३ जना मध्ये २ जना असारको २७ गते भारतदेखि हिनेर सुनौलि नाका हुँदै आएका थिए । एक जना भने तिनै भारतदेखि आउने दुई जनालाई लिन गएका थिए । उनिहरु श्रावण दुईगते भोजपुर बोया आईपुगेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सुन्दर श्रेष्ठले बताए । उनिहरु तिनै जनालाई जरायोटार स्थित होल्डिङ सेन्टरमा पठाई सकिएको छ । भोलिनै पिसिआर परिक्षणको लागि स्वाब पठाईने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले जानकारी दिए । खबर ट्वीट सहकर्मी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०९, २०७७ समय: १८:४२:३०
दिङ्ला–भोजपुरका एक जना पुरुषमा र्यापिड टेष्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १४ बोया बेखुम्चाका एक जना पुरुषमा आर.डि.टी पोजेटिभ देखिएको हो । उनिहरुको आर.डि.टी परिक्षण शुक्रबार नगरपालिकाका आर.डि.टी टोलीले गर्दा ३ जनाको आर.डि.टी परिक्षणमा भारतदेखि आएका एक जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । ३ जना मध्ये २ जना असारको २७ गते भारतदेखि हिनेर सुनौलि नाका हुँदै आएका थिए । एक जना भने तिनै भारतदेखि आउने दुई जनालाई लिन गएका थिए । उनिहरु श्रावण दुईगते भोजपुर बोया आईपुगेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सुन्दर श्रेष्ठले बताए ।
उनिहरु तिनै जनालाई जरायोटार स्थित होल्डिङ सेन्टरमा पठाई सकिएको छ । भोलिनै पिसिआर परिक्षणको लागि स्वाब पठाईने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले जानकारी दिए ।